आमाको मृ’त्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बच्चाहरुको बिच्चली, हेर्नुहोस त कठै बिचरा!! | समाज
आमाको मृ’त्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बच्चाहरुको बिच्चली, हेर्नुहोस त कठै बिचरा!!
May 30, 2021 NepstokLeaveaComment on आमाको मृ’त्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बच्चाहरुको बिच्चली, हेर्नुहोस त कठै बिचरा!!
बडिमालिका नगरपालिका–२ माझीगाउँमा ना’बालक चार भाइबहिनी अलपत्र परेका छन् । आमाको मृ’त्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेर भारत गएपछि चार भाइबहिनी अलपत्र रहेको वडाध्यक्ष डम्मर महतले बताउनुभएको छ ।